Shirkii Shirqoolka Halganka Shacabka – Rasaasa News
Nairobi – Kenya [May 26, 2009] – Shir xassaasi ah oo ka dhacey Hotelka Hilton ee magaalada Nairobi, Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay wakiilo ka kala socdey kooxo isu baheystey waxa lagu magacaabo la dagaalanka Argagixisada Geeska africa, gaar ahaan waxuu shirkan ku wajahnaa sidii loola dagaalami lahaa Ciidamada Sheekh Xassan Turki ee jooga labada Jubba.
Shirkan oo ahaa gunaanad kulamo gooni gooni ahaa oo mudaba soosocday ayaa waxaa isuguyimid Gagabadii labadii maalmood ee u danbeeyey wakiilo ay ka mid yihiin;
Maxamed Amiin Cisman oo ah xildhibaan DKM Soomaliaya kana soojeeda Gobalka Jubbada Hoose.
Cali Axmed [Calidheere] oo hogaaminayey kooxda ONLF ee garabka Maxamed Cumer Cismaan [Jwxo-shiil].
Ilyaas Badal Gaboose waa gudoomiyihii hore Gobalka Jubadda Hoose ee Dawladii C/hi Yuusuf.
Axmed Jaale waa nin Sudan laga soo masaafuriyey isaga oo dawlada Suudaan ku eedaysay in uu lugaha kula jiro hawlo basaasnimo u fulinayay dalka Itoobiya.
laba nin oo ka tirsan sirdoonka Maraykna ee CIA.
sadex nin oo ka tirsan sirdoonka CID Kenya ee ka shaqeysa la dagaalanka wax la yidhaahdo Argagixso.
Madaxa sirdoonka safaarada Itobiya ee Nairobi Ato Girma Tadhasse.
Ilo xog ogaal ah waxay noo xaqiijiyeen in goobta la fadhiyey waxa ugu mmuhiimsan ee ka soo baxay ay ahaayeen;
In la abaabulo kacdoon shacbi oo ka dhan ah wadaadada jooga gobalada beesha Absame dagto.
In xog dhab ah laga keeno madaxda ciidanka wadaadada gaar ahaan Sh. Xassan Turki, Axmed Madoobe, Ibrahin Shukri & nin lagu sheegey magaciisa Gacmadheere.
Waxay isla qaateen kooxahan Shirqoolka isu bahaystay in dhanka Ciidanka hawlgalintiisa iyo diyaarintiisaba looga danbeeyo ONLF garabka Maxamed Cumar Cismaan, dhanka shacabkana Maxamed Amiin & Ilyaas.
In ugu danbeyn hawl galadu bilawdaan bisha Agoosto ee Sanadkan.
Hadaba waxey wararku intaa ku darayaan in todobaadyadii la soodhaafeyba dhaqdhaqaaq ciidan uruurin ah laga dareemayey xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, kuwaas oo la sheegay inay halkaa ka wadeen rag ka tirsan ONLF Garabka Maxamed CumerCisman, halka sidoo kale Magaalada Dhoobley iyadana laga soo sheegayo in la arkey dhaqdhaaaq xaga xubnaha sirdoonka u badan oo wadaadadu halkaas ku soo kordhiyeen ood moodo in arrimahaas looga diyaar garoobayo.
Sida la ogyaheyna Ururka ONLF garabka Maxamed Cumar Cismaan ayaa labadii sano ee u danbeeyeyba u xuubsiibtey Ashahaado la dirirnimo asaga oo dagaalo culculus la galey qeybaha kala duwan ee Islaamiyiinta ka howl gala geeska Afrika Sida Ururka ONLF garabka uu hogaamiyo hada Engineer Saalaxudiin Cabdiraxman Xaji Macow, MJXSG, Al-Shabaab iyo Kaambooniyiinta ka howlgala gobaladda Jubooyinka. Waxaana arintan la dagaalanka islaamiyiinta Afkiika ka sheegay mar uu waraysi siinayay idaacada VOA laanteeda Afka Soomaaliga Maxamed Cumar, waxaana maalinba maalinta ka dambaysa soo shaacbaxaya xidhiidhka ka dhaxeeya Ururka ONLF Garabka Maxamed Cumar & heyadaha sirdoonka reer galbeedka iyo kuwa Itoobiyaba si loo gumaado dadka islaamiyiinta ah ee Geeska Afrika.
Hadaba dagaalka ay hadda ONLF garabka Ina Cumar isugu diyaarineyso in ay ka gasho Jubbooyinka sow ma aha uun Habartii Qoryaha Doonatay ee Qaadi Kari Wayday ee Qaar kale Ku soobiirisay.